Iyi ndiyo yekupedzisira hub yaunoda yeMac yako | Ndinobva mac
Kunyangwe yave nguva kubva Apple yaburitsa iyo nyowani iMac modhi ine Ultra-yakatetepa pamupendero, sarudzo dzinoita kuti dambudziko raunoona mamirioni evashandisi anyangarike pamambure. Iri ndiro dambudziko ratinoona neMac yekupinda chiteshi ichi chiri kumashure uye saka pese patinoda kubatanidza USB ndangariro, kadhi re SD kana chishandiso kuburikidza neUSB-C kana Thunderbolt, tinofanirwa kurerekedza michina.
Isu tawana huni yakagadzirwa nealuminium anodized iyo, pamusoro pekugona kuita basa rekuisa zviteshi pamberi pechishandiso, yakasungirirwa zvakakwana kumutumbi weMac, nekudaro tichidzivirira kuti kana tichizobatanidza chimwe chinhu, iyo hub inosiya saiti yayo.
Iyi hubhu inogadzirwa nealuminium inogara kwenguva refu, saka matambudziko ekubatanidza zvinongedzo paMac yako apera. Iyi hubhu ine matatu emachiteshi eUSB uye SD uye microSD kadhi kuverenga. USB madoko ari 3.0 kuitira kuti iwe ugone kuwana kumhanya kunosvika ku5 Gbps, zvakare uine kuzere kuenderana neUSB 2.0 / 1.1.
Kana iri nzira yayo yekubatana uye kubatisisa iMac, isu tinayo iyo inogona kusungirirwa kumaburi ekufefetedza uye kuburitsa ruzha pasi. Zvino kana yatosungirirwa kumaburi isu tinofanirwa kukora sikuruu kuburikidza neshure iyo inosunga chidimbu uye yakanyatsoomerera kumutumbi weMac.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve ichi chinongedzo iwe unogona shanyira iyi link uye ndizvo Iyo ine mutengo we29,99 eurosMutengo unodhura kwazvo wechigadzirwa une magumo akanaka kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » IMac » Iyi ndiyo yekupedzisira hub yaunoda yeMac yako